Let's Go and Walk to Our Brighten Future.: 20th Anniversary of All Burma Students Democratic Front (A.B.S.D.F)
20th Anniversary of All Burma Students Democratic Front (A.B.S.D.F)
ABSDF နှစ်ဆယ်ပြည်. အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို ယနေ.ညနေတွင် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် တနေရာတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
ယင်းအခမ်းအနားတွင် တော်လှန်းရေးအဖွဲ.အစည်းအသီးသီးမှ ရဲဘော် ရဲဖက်များ၊ နိုင်ငံတကာမှ ABSDF ရဲ ဘော်များ နှင့် အခြား ဖိတ်ကြားထားသူများ ၃၀၀ကျော် တက်ရောက်ကြပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် ဥက့ဌရဲဘော်သံခဲမှ ABSDF အနေဖြင့် မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ကျောင်းသားတပ်မတော်သည် တကယ်ရှိခဲ့သည်မှာ (၂၀)နှစ် ရှိပြီးမှာ အထင်ရှားဖြစ်ပြီး။ ပြည်သူ.လူထုအတွက် စစ်အာဏာရှင် စံနစ်ကို ဖယ်ရှားရာတွင် လက်ကိုင်တိုက်ပွဲ အပါအ၀င် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ABSDF တွင် ဗဟိုကော်မတီ ၁ရဦး၊ တပ်မှူး ၇ ဦး၊ ကေဒါ ရဲဘော် ၁၀၀ ကျော်၊ မိသားစုဝင် (၁၀၀၀) ကျော်နှင့် ပြည်သူလူထု သန်းပေါင်း ၆၀ ကျော် ရှိကြောင်းနှင့် မြန်မာပြည် စစ်အာဏာရှင် စံနစ်မှ လွတ်မြောက်သည် အထိ ဆက်လက် ညီနောင် မဟာမိတ် အဖွဲ.အစည်းများ၊ နယ်စပ်၊ ပြည်တွင်း၊ တတိယနိုင်ငံရောက် အဖွဲဝင်ရဲဘော် များဖြင့် လက်တွဲ တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။
အခမ်းအနားတွင် ABSDF မှ ကျဆုံးသွားသော ရဲဘော် အာဇာနည်များကို ဂုဏ်ပြုအမည်များထိုးထားသည့် ကြေးပြားဖြင့် ဂုဏ်ပြု အလေးပြုခြင်း။ ကျဆုံးသွားသော ရဲဘော်များရဲ. မိခင်များ ညီကိုမောင်နှမများကို ဂုဏ်ပြု လွာ များပြောကြားခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် ဓါတ်ပုံ ဗီဒီယို နှင့် သီးလေးသီး ညီအကိုများနှင့်ရဲဘော်များရဲ. တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲများဖြင့် ပြ သ ဖျော်ဖြေပါသည်